Annaga nagu saabsan - Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
Guangdong Shengte Electric Co., Ltd. waxaa la aasaasay Janaayo 19, 2011. Waxay ku taallaa Aagga Farsamada Sare, Magaalada Danzao, Degmada Nanhai, Magaalada Foshan, oo leh gaadiid ku habboon iyo jawi qurux badan.Waxaan nahay ganacsi hal abuur leh oo diiradda saaraya qaybinta tamarta cagaaran, badbaadinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
Waxaan ku takhasusnay R&D, wax soo saarka iyo iibinta Transformers-yada korontada iyo kuwa qallalan.Kooxda shaqada ee shengte oo leh wax soo saarka sare iyo tignoolajiyada wax soo saarka, naqshadaynta farsamada, wax soo saarka taxaddar leh ee badeecad kasta.Isla mar ahaantaana nuugo khibrad qani ah ee kormeerka, si tayada alaabta loo dammaanad qaado.
Waxayna leedahay koox sare oo saynis iyo teknoloji, in ka badan 100 shaqaale ah, oo ay ka mid yihiin in ka badan 20 shaqaale sare ah iyo kuwa dhexdhexaad ah.rabitaanka bilowga ah ee aasaasida shirkadu waa in la abuuro wax soo saarka heerka koowaad, tayada aad u fiican, daacadnimada ganacsiyada ganaaxa, hadda aasaasaha rabitaanka inuu noqdo aag.
Waxaan haysanaa qalab wax soo saar iyo farsamayn dhamaystiran, imtixaan kaamil ah iyo macneheedu waa ogaanshaha.Iyada oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo wax soo saarka ah iyo qalab xooggan iyo aasaas farsamo, shirkaddu waxay leedahay aag dhismo ah 12,000 mitir oo laba jibbaaran.Shirkadu waxay leedahay heer caalami oo heer caalami ah oo faakuum ah, qalabka dabaysha xudunta u ah, qalabka dabaylaha gariiradda, qalabka tijaabada otomaatiga ah.
Ku qanacsanaanta macaamiishu waa shuruudayada kaliya, waxay ku socon doontaa naqshadeynta, wax soo saarka, adeegga iibka kadib marxalad kasta.Kaliya marka macaamiishu ku qanacsan yihiin alaabtayda, si aan u noqono guuleyste bulsho oo caadi ah.Midnimada faa'iidada bulshada iyo faa'iidada ganacsigu waa yoolka maamulka ee shirkadda.Dhammaan shaqaalaha shirkadu si adag, daacadnimo, daacadnimo, xeerka adeegga, waxay diyaar u yihiin inay abuuraan oo ay ilaaliyaan wadashaqeyn dhow oo lala yeesho macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.Waxaan soo dhaweyneynaa dhammaan asxaabta oo ay ku jiraan kuwa cusub iyo kan hore si ay u soo booqdaan si daacad ah.
Dhinaca qaybinta korantada cagaaran, shirkadu waxay bixisaa xalal awood qaybin isku dhafan, iyo sidoo kale alaabada tignoolajiyada cusub iyo adeegyo taageero tayo sare leh, sida laga soo xigtay shabakadda korontada ee magaalooyinka, isbeddelka korontada miyiga, isticmaalka tamarta tuulada, ilaalinta tamarta dhamaystiran Isticmaalka tamarta warshadaha, hal-abuurka ilaalinta tamarta mashruuca, iwm.
Sanadihii la soo dhaafay, alaabadayadu waxay u badan yihiin sida: transformer oil-immersed S11, S13, epoxy resin casting transformer qalalan SCB10, SCB11, kuwaas oo SCB11 waa transformer furan.There waxaa la isku daray nooca (American) transformer, pre-rakibay (Yurub) substation iyo danab sare iyo hoose oo dhamaystiran qalab koronto iyo wixii la mid ah.